Kusetshenziswe amadola ayizigidi ezi-3,2 asetshenziswe ezinsukwini ezimbili ekukhangiseni iPixel | Izindaba zamagajethi
I-Google isebenzisa imali eyizigidi ezingama- $ 3,2 kwizikhangiso ze-TV zePixel ezinsukwini ezi-2 kuphela
Umqondo wokuthi i-Google Pixel entsha inokuthintana nomkhiqizo we-Nexus. Kumele kucaciswe ukuthi ifoni yakwaGoogle iyodwa yakhelwe ngokuphelele i-Google futhi ukwenziwa kwayo kuphathiswe i-HTC, kepha umqondo nomqondo ngokuphelele kusuka kubafana baseMountain View.
Ngalo mqondo engqondweni, singaqhubekela phambili ukuqonda kangcono ukuthi kungani manje senza AbakwaGoogle basebenzise amadola ayizigidi eziyi-3,2 kuzikhangiso ze-TV zePixel kungapheli izinsuku ezi-2. Nge-Nexus ayizange isondele nakulezo zibalo, kulokho esingakusho vele ukuthi sizobona ama-Pixels amaningi eminyakeni embalwa ezayo uma konke kuhamba kahle ngaphandle kwezinkinga ezinkulu.
Futhi hhayi kuphela ukuthi bazotshala imali ku-push yokuqala ukuze iPixel ikhukhuleke ngokuhamba kwesikhathi, kodwa bazoba amakhulu ezigidi ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. IGoogle iyakuqonda ukuthi sekuyisikhathi sayo futhi izosizakala, ikakhulukazi ngokwenzekile ngeGalaxy Note 7 yakwaSamsung kanye ne-bland iPhone 7 ekhiphe i-3,5mm audio jack connection.
I-Google kufanele iqinisekise izibalo zokutshalwa kwemali ekukhangiseni, kepha umphathi weGoogle usevele ukubonile lokho umkhankaso wokukhangisa obaluleke kakhulu engxoxweni esheshayo kuReuters. Manje kusazobonakala ukuthi ngabe lezo zikhangiso ze-TV ziyasebenza yini, njengoba kuzofanele ugcine ukukhangisa kumasayithi aku-inthanethi nasemaphephandabeni nakweminye imidiya yendabuko.
Imibuzo iyaqhubeka nokuphakama mayelana nokuba khona kwale foni lapho labo abaseMountain View behlale behlisa abanye abakhiqizi, kepha ukulinda abanye ukuthi benze amafoni ongawenza kuyinjongo enkulu, ngaphandle kokuthi isoftware ezonikeza inothi nokuthi iGoogle izolawula futhi itotobele njenganoma ngubani omunye umuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Google isebenzisa imali eyizigidi ezingama- $ 3,2 kwizikhangiso ze-TV zePixel ezinsukwini ezi-2 kuphela